Dawladda Talyaaniga oo ka Farxisay Soomaaliya iyo Heshiis Lacag badan ku baxayso | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Dawladda Talyaaniga oo ka Farxisay Soomaaliya iyo Heshiis Lacag badan ku baxayso
Nov 8, 2019 - 4 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis lagu fulinayo mashaariic kala duwan taasoo ku baxayso lacag gaadheysa 3 Milyan oo Euro.
Wasiirka Wasaaradda Caafimadka Soomaaliya Drs. Fowsiiya Abiikar Nuur oo u saxixiday dowlada Soomaaliya heshiiskan ayaa sheegtay in dhaqaalahan iyo mashaariicda kaleba ay dowladda Talyaanigu ugu tala gashay in wax loogu qabto Caafimaadka Dadka Soomaaliyeed.
“Soomaaliya iyo Talyaaniga xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya waana ku mahadsan yihiin taageerada dhinac walba ah, qalabkan wax badan ayuu ku kor dhin doonaa shaqada Isbitaalka iyo Dadka adeegga u baahan”ayay tiri Wasiir Fowziya.
Dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay maamulka iyo gacan ku haynta Cibitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho biloowgii Febraayo ee Sanadkan, waxaana haatan adeegyo Caafimaad oo bilaasha ah uu u qabtaa dad ka badan 40,000.
Daanyeero Somali kulahaa “talyaani oo ka farxiyay Somaliya” waaba umad sida caruurta oo kale iyo daanyeerada u mooday dowladnimada dan in eey tahay tuugsi.
Naagtaan Gaaljecelka ah, ee iyadaba u eg qaxootiga ee laleeyahay waa wasiir caafimaad, iyada ayaaba u baahan caafimaad, oo eey ka muuqataa dayacaad. Daanyeerad. Qabiilkeeda Gaaljecel waa dadka ugu badan ee argagixisda alshbaaab ciidanka u ah, iyadana labadaan ninn ayeey sida sandwich ka dhex u gashay. Waana ku taageersanyahiin argagixisda alshabaab xataa in eey wasto labadda nin ee cadaanka ah, laakiin, Somalida kale ee ilaa hadeer aanan fahmin in alshabaab yahay urur lagu baabi’nayo, looga aargudanayo qabiilada qaarkood ayaa kasii daanyeertaan.
CADAADO alshabaan CADAADO majoogto OO WAXAA jooga dadkii uudhshay tankale horta Adiga tahay nin reer CADAADO AH mise magaca WAA bug brother
Waan kusalaamay. Maya, bug ma’ihi, magaca waa rasmi.
Waa runtaa oo alshbaab majoogaan Cadaado, waligoodna ma’imaan. Sababtoo ah, waan is fahansanahay qorshahooda iyo qorshaheena. Daanyeerta kale ee Somaliyeed ayaana fahamsiin la’nahay maadaama eey yahiin dad caqli daanyeer ah, oo 20 sanno eey ku qaadaneeyso in ey fahmaan wax qofka caadiga ah uuu ku fahmaya 20 daqiiqo.
Argagixisada alshbaab qabiilada ka galay danbiyada tirrada badan qabiilo kale oo Somaliyeed iyo dalka Somaliya ayeey aheeyd in eey ciqaabaan, oo ka gudaan waxii eey galeen, kabacdina joojiyaan. Laakiin, waa joojin waayeen kadib markii eey ciqaaben qabiiladaas, oo laga guday waxii eey sameeyeen waxeey aheeyd in aanan waxba lagu siyaadin. Laakiin qabiiladii isticmaalay alshabaab ayaa hadeer qaan lagu leeyahay, oo xadkii ka tilaabay, Markooda ayaa iyaganna laga aargudan. waana nasiib darrada Somalida heeysata, oo ah in aanan lakala aqoon “ciqaabta iyo dambiga in eey isku qalmaan”.
Cadaado cuqdadii Khayre aad u qabtay miyaa wasiirada beesheeda kula dul dhacday kula yaabimaayo dad gacan adag ku jira ayaa tihiin qoorta gareen👍